योनीबाट सेतो पानी किन बग्छ ? सेतो पानी बग्ने समस्याबाट बच्नेहरु उपायहरु « Sajha Page
प्रकाशित मिति: November 4, 2017
स्वभाविक रूपमा योनि ओसिलो नै हुन्छ । योनिबाट सेतो पानीजस्तो पदार्थ बग्नुलाई योनिश्राव भनिन्छ तर त्यसको अर्थ सधैं नै रोग लागेको भन्ने हुँदैन । योनिश्राव हाम्रो सामान्य शारीरिक क्रियासँगै स्वभाविक रूपमा हुन्छ । यस्तो स्वभाविक योनिश्राव महिनावारी हुने बेला वा यौन उत्तेजना भएका बेला बढी देखिन्छ । पाठेघरको मुखबाट हुने श्राव यस्तै महिनावारी भएको एक हप्तापछि सुरु भएर डिम्ब निष्कासनको बेलासम्म हुन्छ । यौन उत्तेजनाका बेला यसरी योनिश्राव हुनुको कारण यौनसम्पर्कलाई सजिलो बनाउनुका साथै शुक्रकीटका लागि अनुकूल स्थिति सिर्जना गर्नु पनि हो । स्वभाविक किसिमको योनिश्रावका लागि कुनै किसिमको उपचारको आवश्यकता पर्दैन |
किन हुन्छ ल्यूकोरिया (Leucorrhoea) को समस्या ?
-यौनांगको सरसफाई नगर्दा संक्रमण हुन सक्छ । यसको कारणले सेतो पानी बग्ने समस्या देखिन सक्छ ।
-महिनावारी, गर्भावस्था तथा मोनोपज अर्थात महिनावारी बन्द हुने समयमा महिलाको शरीरमा हुने हर्मोनल गडबडका कारण यो समस्या देखिन सक्छ |
-बारम्बार गर्भपतन गर्दा पाठेघरमा हुने संक्रमणका कारण पनि ल्यूकोरियाको समस्या देखिन सक्छ ।
-मधुमेहले पनि कहिलेकाँही यौनांगमा संक्रमण गराउन सक्छ । त्यसले गर्दा पनि ल्यूकोरिया हुन सक्छ ।
-धेरै चिल्लो, मसालेदार, जंक फूड तथा धेरै उपवास (ब्रत) बस्नाले पनि ल्यूकोरिया निम्त्याउन सक्छ ।
-गलत गरिकाले शारीरिक सम्बन्ध राख्दा यौनांगमा चोट लाग्न सक्छ । जुन ह्वाइट डिसचार्जको कारण बन्न सक्छ ।
-गोनेरिया, क्लेमाईडिया जस्ता यौन सम्पर्कका कारण सर्ने रोगले यौनांगमा संक्रमण फैलाउँदा ल्यूकोरियाको समस्या देखिन सक्छ ।
-कहिलेकाही गर्भनिरोध चक्कीहरु, क्रिम तथा अन्य गर्भनिरोधक साधनको कारण संक्रमण हुन सक्छ । जसको कारण पनि ह्वाइट डिसचार्ज हुन सक्छ ।
ह्वाइट डिसचार्ज अथार्त सेतो पानी बग्ने समस्याबाट बच्नको लागि यौनांगको नियमित सरसफाइ गर्ने, स्वस्थ खानेकुरा खाने आदी गर्न सकिन्छ । यसलाई केही आयुर्वेदिक विधिबाट पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, ती यस प्रकार छन्ः
-चार चम्चा धनिँयाको दानालाई रातभर पानीमा भिजाउने । बिहान त्यसलाई छानेर खाली पेटमा पिउने ।
-एक चम्चा अमला पाउडरमा एक चम्चा मह मिसाएर दिनमा दुई पटक पानीको साथमा सेवन गर्ने ।
-चामललाई अलि धेरै पानी हालेर उमाल्ने । उम्लेको चामलको पानी (माड) मा एक चिम्टी नुन मिसाएर पिउने ।
-अम्बा अर्थात बेलौँतीको पातलाई धोएर सफा पानीमा उमाल्ने । जब पानी आधा रहन्छ, त्यसलाई पिउने ।
-जेठी मधुको जरालाई पिँनेर धुलो बनाउने । एक चम्चा धुलालाई मनतातो पानीमा घोलेर बिहान बेलुका सेवन गर्ने ।
-ब्ल्याकबेरी (कालो ऐँसेलु)को बोक्रा या बिँयालाई पिँनेर धुलो बनाउने । एक चम्चा धुलालाई मनतातो पानीमा घोलेर बिहान बेलुका सेवन गर्ने ।
-ईसबगोल (अश्वकर्ण) को भूसीलाई दुधमा लामो समयसम्म उमाल्ने । यसमा मिश्री घोलेर सुत्नुभन्दा अघि पिउने ।
-मेथीको दानालाई पिँनेर धुलो बनाउने । एक चम्चा मेथीको पाउडर दिनहुँ बिहान बेलुका सेतो भेलीमा मिसाएर सेवन गर्ने ।
-एक चम्चा जौँ र एक चम्चा अश्वगंधाको धुलोमा मिश्री मिसाएर मनतातो दुधसँग खाने ।
-रुखबाट निस्कने खानमिल्ने गमलाई रातभर पानीमा जिएर राख्ने । बिहान छानेर पानी पिउने ।
यी दश विधिले ह्वाइट डिसचार्ज अथार्त सेतो पानी बग्ने समस्या नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ |